Anosizato: nanolotra kianja ny MVola | NewsMada
Anosizato: nanolotra kianja ny MVola
Notokanana, ny zoma 30 avrily teo ny kianja fanatanjahantena, ao anatin’ny fandaharanasa M’Hetsika MVola eny Anosizato. Nanatrika ny fotoana ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), Andriantsitohaina Naina, ny tale jeneralin’ny MVola, Matthieu Macé ary ny tale mpanatanteraka ny fikambanana Fondation Axian.
Hanome tombontsoa maro ny tanora eny Anoszato ity kianja ity, ahazoana milalao baskety, baolina kitra ary volley. Misy koa ny efitra manokana hitaizam-batana, miampy ny fisoloana akanjo ho an’ny lahy sy ny vavy ary ny fidiovana sy fivoahana.
Hitantana mahaleontena ny kianja ny fikambanana tanora ara-panatanjahantena sy kolontsaina Anosizato (Fima), tohanan’ny fitantanana ny fanatanjahantena ao amin’ny CUA. Noravahin’ny Fondation Axian sy ny Fondation H kisary ny tamboho, nataon’ilay mpanakanto Naty Kaly. Tsiahivina, ity mpanakanto ity ihany koa no nandravaka ny foibe fandraisana ireo tsy manan-kialofana Akany Iarivo Mivohy.